Erle Robotic inotipa fungidziro yeramangwana remarobhoti | Linux Vakapindwa muropa
Isu takatonyora akati wandei zvinyorwa nezve kutanga kweSpanish Erle robotics, iyo kunyangwe pahujaya hwayo yakatopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo mune ino chikamu Iye zvino anodzoka kumberi kwemushumo wekufungidzira ramangwana remarobhoti uye kuongororwa kweongororo yavave vachiita. Iyo munda uripo uye uchave wakanyanya kumberi ramangwana, munguva dzichangopfuura kutora matanho makuru mukusimudzirwa kwezvinhu izvi.
Irobhoti Iri bazi rinobatanidza matavi mazhinji einjiniya kana ekuraira kwetekinoroji, senge mechatronics, komputa, uye zvemagetsi, izvo, kana zvabatanidzwa, zvinogonesa kugadzirwa kwemarobhoti. Iko kushanduka kwebazi iri kwakatungamira kubva kumazana emakore apfuura vachifungidzira kuvakwa kwe automata izvo zvakaita kuti hupenyu huve nyore kwatiri, kusvika nhasi uno umo marobhoti uye / kana huchenjeri hwekunyepedzera vatove chikamu chehupenyu hwezuva nezuva hwevakawanda vedu. Uye ndiani anoziva zvavanogona kuita mune ramangwana ...
Kubva kuLxA hatigone kukanganwa mapiyona senge Spanish Leonardo Torres Quevedo chigadziri chemufananidzo, kana yazvino Erle Robotic, iyo yakagara nhaka iyi kufarira mune hunyanzvi uye yakaisazve Spain kumberi kwenzvimbo ino inofambisa mabhiriyoni emauro mukudyara, uye iyo icharamba ichikura muhuwandu hwehupfumi uye kufarira nekuda kwekukosha kwayo. Naizvozvo, isu tinogovana newe uno wongororo yenhoroondo yerobhoti kuitira kuti iwe uzive zvishoma nezve zvakapfuura, zvazvino uye zvemangwana.
1 Chizvarwa 0-1: matanho ekutanga
2 Chizvarwa chechipiri: kuvapa pfungwa
3 Chizvarwa 3: mucheche boom urikuuya!
4 Chizvarwa 4: Ngakuve nechiedza ...
5 Chizvarwa 5: ramangwana
Chizvarwa 0-1: matanho ekutanga
Dzvanya kuti uwedzere. Copyright © Acutronic Robotics 2017. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Kubva pane yekutanga otomatiki automata inotsanangurwa mumabasa aHeron weAlexandria muzana ramakore rekutanga BC, achipfuura nepazvidzidzo zvaLeonardo Da Vinci muzana ramakore regumi nemashanu, iko kuiswa kweiyo izwi "robhoti" . kusvika kwekutanga kwerobhoti rakagadziriswa ruoko kubva kuGeneral Motors kunatsiridza kugadzirwa mumafekitori ...
Chizvarwa chechipiri: kuvapa pfungwa
Muchizvarwa chekutanga mamatotoni kana marobhoti, paingova nemagetsi uye zvemagetsi zvigadzirwa zvekugadzira zvishandiso zvinogadzira mabasa. Nekudaro, nekuuya kwechizvarwa chechipiri, "pfungwa" dzemarobhoti dzakatanga kuitwa, kusanganisira sensors yemhando dzakasiyana kuitira kuti vakwanise kutora mamwe maratidziro ezvakatipoteredza kana hukuru kuitira kuti vagone kuita izvi "zvinokatyamadza" kubva kunharaunda yavo kuti vape mhinduro dzakanatswa zvinoenderana nezviitiko zvakasiyana zvavanosangana nazvo. Pakupedzisira, vanova vanhu ...
Chizvarwa 3: mucheche boom urikuuya!
Kunyangwe paine mabhenefiti emarobhoti, kuberekwazve kwechokwadi kwemarobhoti hakuna kutanga kusvika kuma80. Makambani akatanga kuisa mari zhinji mavari uye kutengesa kwavo kwemaindasitiri nemabasa epamba kwakakwira. Iko kukura kwecomputer world, pamwe nemagetsi, zvakabvumidza kufambira mberi uku kushandiswa kugadzira marobhoti ari nani ayo aigona kugadziriswazve. Kusvika kwe Linux kernel uye H-ROS, inoshandiswa zvakanyanya muchikamu.
Ivo vaive vakabudirira zvekuti pakupera kwema90s ekutanga marobhoti matoyi kits akatanga kuoneka, senge LEGO Pfungwa Dutu uye mamwe akawanda akafanana mapurojekiti emakwikwi. Kune zvakare AIBO, iyo robhoti yaSony yakatsaurirwa kuzorora. Iwo akakosha anoita robhoti kwete kungoonekwa sechishandiso chekuita kuti hupenyu huve nyore, asi zvakare semidziyo yevaraidzo.
La kuomesa uye masisitimu ivo vanotanga kuwana kukosha kwekubatanidza kuyedza kweindasitiri uye kudzikisa mari. Uye zvakare, iyo yekutanga mitauro mitauro yakanyatsogadzirirwa robhoti yakatanga kugadzirwa.
Chizvarwa 4: Ngakuve nechiedza ...
Uye mwenje wakave ... Zvakanyanya kunyorova, asi kuferefetwa kwe Artificial Intelligence, kusvetuka kukuru kwecomputer uye kwekugadzira neural network (nyika yehupenyu inotanga kuve kurudziro yekugadzira marobhoti akafanana nesu), tanga kupa marobhoti nehumwe huchenjeri muzana ramakore rechiXNUMX. Iwo marobhoti aisangova nekufamba uye "pfungwa" idzo dzatinotaura nezvadzo, vakapiwawo njere dzekuti vatonyanya kuzvitonga uye kuzvimiririra. Kuvimba kwavo nevanhu kunotanga kudzikira, uye kwete izvozvo chete, ivo vaive zvakare vanokwanisa kudzidza kutarisana nemamiriro ezvinhu nenzira iri nani.
Kubva pakuona kwangu, robhoti uye AI inoteedzera, uye ndeyokuti yakapararira kunenge pasi rose. Isu tese tine vabatsiri pane edu mafoni, uye isu tinoshandisa mamwe masisitimu anoenderana neAI, sevashanduri, masystem ekufanotaura, drones, uye mamwe marobhoti epamba, nezvimwe. Musika mutsva uye muhombe unoita kuti makambani anowanda afarire marobhoti uye mukupa mhando iyi yemasevhisi.
Chizvarwa 5: ramangwana
Uye uku kungori kutanga, sezvaunotarisira ramangwana rakajeka iro rinowana zvakatowanda kusimbisa AI uye kuvandudza zvigadzirwa. Saka masekeletoni achauya anopa vanhu hunyanzvi hwemuviri kana kuvabatsira nezvidzidzo zvemuviri kana zvekuvapa kufamba, dzimba dzacho dzinotonyanya kuve robhoti, ivo vachakwanisa kutora mamwe mabasa akawanda izvo parizvino zvisingaite, zvinokwanisa kuita mamwe mabasa ane njodzi, mamwe marobhoti ezvevashandi vehurumende (chengetedzo, sevhisi, mushonga, ... Ndiani anoziva kana mumakore mashoma iwe ukavhura musuwo uye murume wekuendesa haasi munhu!
Ona yakazara infographic - Erle robotics
Copyright © Acutronic Robotic 2017. Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Erle Robotic inotipa fungidziro yeramangwana remarobhoti
Nezve mutongo wekupedzisira nezve mutengesi:
Elive anokwanisa kumhanyisa uye kutsvinda kupfuura pakutanga